जस्तापाताले घर छाएसंगै स्थानीय बासीमा खुशी - नेपालबहस
जस्तापाताले घर छाएसंगै स्थानीय बासीमा खुशी
९ फागुन,बलेवा । सडकले खरबारी मासेको छ । सम्म ठाउँका खरबारीमा खोजीखोजी मूल सडक निकालिएका छन् । भीरपहरामा लहलह देखिने खर काट्नै कठिन छ । अप्ठेरा भीरपहरामा पुगेर खर काट्न अहिलेका युवा पुस्ता मान्दैनन्, वृद्धवृद्धाले सक्दैनन् ।
वर्षायाममा राम्रो वर्षा हुने र हिउँदमा खर काट्ने कामदार भेटिए मात्रै घरको छानो फेर्न पाइन्थ्यो । अझै पछिल्लो पुस्ताले त खर वा परालको छानो बनाउने सीप नै सिकेका छैनन् । सीपको अभावमा छाएको खरले के पानी छेकोस् ?
हिउँदका महिना जसोतसो कटे पनि वर्षामा चुहिने पानीले चुलोमा पोखरी बनाउँथ्यो । खरले छाएको लामो गोठ बनाएर त्यहीँ भान्छाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पानीको ओत लाग्नेसम्म हो । गोठ होस् वा घर, कठिन दिनरात कटेकै थिए । यस्तै समस्या जैमिनी नगरपालिका–३ का डिलबहादुर विकलाई थियो । आफैँले छानो फेर्न आर्थिक अवस्था कमजोर छ । खर, अर्थ र सीपका अभावमा वर्षाका कठिन दिन कटाइरहेका उनी जस्तै जैमिनीका खरको छानो भएका कसैलाई अब भने चुलामा पोखरी देख्नुपर्दैन ।
डिलबहादुरले अहिले १८ हात लामो घर बनाएका छन् । गोठमा बस्ने उनी अहिले जस्तापाताले छाएका घरमा बस्छन् । सङ्घीय सरकारले ल्याएको घर तथा फुसका छाना विस्थापन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाले धमाधम खरका छाना फेरेर जस्तापाता वितरण गरिरहेको छ । “सरकारले जस्ता दिने भनेपछि गोठमा बस्नेले पनि घर बनाएका छन्, घरमा खुशी छाएको देखियो”, नगरपालिका राजश्व परामर्श समितिका सदस्य विष्णु आचार्यले भने, “सानो तर मानव जीवनमा घरको छाना महत्वपूर्ण रहेको अनुगमनमा पायौं ।” दमेकका खगी विक, चन्द्रकला विक, नन्दकली श्रीषलगायतले यस वर्ष घरको छानो जस्ताले मात्रै बनाएनन्, नगरले जस्तापाता दिँदा आफैंले मेहनत गरेर बलियो गाह्रो पनि लगाए । नगरपालिकाका खरका छाना विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत कूल घरधुरी ९८७ छ । तीमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत घरमा जस्ताको छानो बनाउने योजना नगरपालिकाले बनाएको थियो ।
यस वर्ष बनिसक्नुपर्ने ६९१ घरधुरीमा हालसम्म २४० घरधुरीलाई जस्तापाता उपलब्ध गराइएको नगर प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले बताए । नगरपालिकाबाट जस्तापाता पाएका जैमिनीवासीले घरको मर्मतसमेत गरेका छन् । वडा कार्यालयको सिफारिशमा लाभग्राहीलाई घरको आकारअनुसार प्रतिघर १८ देखि बढीमा ६६ पातासम्म जस्तापाता उपलब्ध गराइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
गत वर्षदेखि शुरु भएको कार्यक्रम आगामी आवमा सबै घरमा जस्तापाता लगाएर सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । “नागरिकको सुरक्षित आवास हाम्रो दायित्व हो”, नगरप्रमुख पौडेलले भने, “हामीले सुकुम्बासीका लागि घर बनाउने रकमसमेत दिएका छौं ।” जस्ताको नापअनुसार रु ५० हजारदेखि ८० हजारसम्मका जस्तापाता उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास ६७३ विपन्न परिवारमा अब जस्तापाता ३ महिना पहिले
दश स्थानीय तहका दुई हजार ३८८ घरमा खरका छाना विस्थापित गरिने ३ महिना पहिले
शिवराज नगरका ४४० खरको छानो हटाएर जस्तापाता ४ महिना पहिले
कास्कीमा एक हजार ८७४ खरका छाना परिवारका घरमा जस्तापाता ४ महिना पहिले
सर्वाङ्गीण विकासका लागि बाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आवश्यकता ६ घण्टा पहिले
ओलीले आज सुन्दरीजलमा आइपुग्ने पानीको अवलोकन गर्ने १० घण्टा पहिले
स्थानीयवासीले सञ्चालन गरिरहेका अल्लो उद्योग सङ्कटमा ६ घण्टा पहिले
नेकपा विभाजनः अध्यादेश ल्याउने कि संसदमै सामाना गर्ने ? ७ दिन पहिले
रश्मी बनिन् लेट मी इन मिसेज ब्युटी क्विन नेपालको बिजेता ४ दिन पहिले
कैदीबन्दीबीच भएको झडप अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन ५ दिन पहिले
स्वस्थ्य मनको लागि खेलकुद अपरिहार्यः सासद यादव ६ दिन पहिले
म्यान्मारमा सेनाले चलाएको गोली लागेर तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु ६ दिन पहिले
ओली गौतमको भैँसेपाटी निवासमा २४ घण्टा पहिले
सौन्दर्य प्रसाधन ‘द स्किन एड’ को सफ्ट लन्च बिराटनगरबाट सुरु ४ दिन पहिले
सडक ट्र्याक खुलेपछि फेरिदै गोर्खेपानीको मुहार ४ हप्ता पहिले
बेइजिङका नगरहरुलाई कोरोनाको उच्च र मध्यम जोखिमका रुपमा छुट्याइयो ३ हप्ता पहिले
नेबिसंघको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ६ दिन पहिले
राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए राजदूतद्वय रेग्मी र विश्वकर्माले १ हप्ता पहिले
प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमन्त भण्डारी माघ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी १ हप्ता पहिले
प्रदेशकै गौरव आयोजना तनहुँ सभाहल कोरोनाको कारण प्रभावित २ हप्ता पहिले
तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको विकास निर्माणमा अनुकूल आधार तयार भएको छः मुख्यमन्त्री पोखरेल ३ हप्ता पहिले
बिहीबार यी १३ कम्पनीले गरे नेप्सेमा सर्वाधिक कारोबार ? २ हप्ता पहिले
नागरिकता संशोधन विधयेकको विरोघमा नेविसंघद्धारा सिठी जुलुस ८ महिना पहिले
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई सिद्धार्थ ग्रुपमा छुट १ दिन पहिले
आर्सनललाई हराउँदै टोटेनहम शीर्षस्थानमा ३ महिना पहिले
धनाढ्य उपेन्द्र महतोद्धारा अर्बौको कर छलि २ महिना पहिले